XOG: Qoorqoor iyo Lafta-gareen oo diidan Qodobo ay soo jeediyeen Midowga musharixiinta - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. XOG: Qoorqoor iyo Lafta-gareen oo diidan Qodobo ay soo jeediyeen Midowga musharixiinta - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
XOG: Qoorqoor iyo Lafta-gareen oo diidan Qodobo ay soo jeediyeen Midowga musharixiinta
Akhriso 9-ka Qodob ee ugu muhiimsan Qoraalkii ay Midowga Musharixiinta u direen Golaha Wadatashiga Qaran
Shirka Madasha Wadatashiga Qaran ee Doorashooyinka ayaa maalintii saddexaad galay, iyadoo maanta ay xubnaha Golaha u bilowday shir albaabada u xiran yihiin oo go’aano looga gaarayo xaaladda Doorashada.
Xogta la helay ayaa sheegeysa in qaar ka mida madaxda maamul Goboleedyada ee taageersan madaxweynaha xilkiisu dhammaaday ee Maxamed C/llaahi Farmajo ay ka horjeedaan soo jeedin ka timid Midowga Musahrixiinta iyo Bulshada Rayidka.
Madaxweynayaasha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye iyo Koonfur Galbeed C/casiis Xasan Maxamed ayaa la sheegay inay ka hor yimaadeen in shirka go’aan looga gaaro Amniga dalka oo ay ku doodeen inuu ka baxsan yahay arrimaha Doorashada, balse amniga Doorashada hore loogu wareejiyey Ra’iisal wasaaraha.
Qoorqoor iyo Lafta-gareen oo lagu tuhunsan yahay inay shirka ku metalayaan Farmaajo ayaa sidoo kale ka gows qabsaday in odayaasha dhaqanka ee soo xulaya ergada lagu koobo 135-tii oday ee heer Federaal oo ahaa dalab ka yimid Midowga Musharixiinta iyo Bulshada Rayidka.
Hoos ka akhriso Qododbadda ugu muhiimsan ee ay dalbadeen Midowga Musharixiinta
1- Odayaasha dhaqanka ee soo xulaya ergooyinka waa in ay noqdaan kuwii ka tirsanaa 135-tii oday dhaqan. Waana in la faafiyo liiska magacyadooda inta aysan doorashadu billaaban.
2- Waa in ergada la diiwan geliyo, lana faafiyo liiska magacyadooda, ugu yaraan muddo seddax cisho ahna fursad loo siiyo inay kula kulmaan musharraxiinta kursiga ku tartamaya, waana inaan ergada aan laga hor istaagi karin la kulanka musharraxiinta kursiga ku tartamaya.
3- Shakhsiga lagama hor istaagi karo inuu kursiga beeshiisa u tartamo, waana in kursi kasta lagu tartamo, lana mamnuuco malxiiska ama in shakhsi loo xiro.
4- Musharraxa waxaa tartanka doorashada looga joojin karaa oo keli ah fal danbiyeed ay Maxkamad xukuntay, ama in lagu hayo fal argagexiso oo caddayn leh. 3- Waa in musharraxiinta oo dhammi ay fursad siman u helaan la kulanka, iyo ka dhex ololaynta ergada kursiga.
5- Waa in Guddiyada Hirgelinta Doorashooyinka Heer Federaal iyo heer dowladgoboleed loo madaxbanneeyo hirgelinta doorashooyinka. Waa in xafiiska Ra’iisul Wasaaraha uu hubiyaa madaxbannaanida guddiyada, tillaabna ka qaadaa shakhsi kasta oo guddiyadaas ka mid ah oo lagu helo musuqmaasuq ama ku milmidda siyaasadda.
6- In dib loogu laabto dhammaan doorashada kuraasta lagu muransan yahay, la burriyo go’aannadii ay gaareen guddigii xallinta khilaafaadka ee dib u habaynta lagu sameeyey.
7- Codbixintu waa xaq dastuuri, adduunkana kama dhicin codbixiye qarash ku bixinaya ka qaybgalka doorashada. Haddaba si loo suuliyo caqabadaas waa in meesha laga saaro qarash kasta oo ay ergooyinka bixin lahaayeen sida; qarashka danbi baarista, covid19, iwm.
8- In Raysalwasaaraha iyo golaha wasiirada ay si buuxda masuul uga noqdaan amniga dalka, madaxweynihii horena uu ku ekaado murashaxnimadiisa.
9- Sida uu dhigayo dastuurka kmg ah, waa in Ra’iisul Wasaaraha iyo xukuumadiisa ay xaqiijiyaan in ciidanka laga dhex saaro arrimaha siyaasadda.
Previous articleGuddoomiyaha Xisbiga Waddani oo Su’aalo lagu weydiiyay Xarunta CID-da Hargeysa iyo xaalad ka taagan..
Next articleMaxaa ka jira in Q/Midoobay dib ula wareegeyso maamulka Hawada Somaaliya..? (Jawaab Culus)